समाचार - प्रेम वर्ग: जम्पि egg अण्डा के हो?
जम्पिंग अण्डा एक महिला हस्तमैथुन सेक्स उत्पादन हो, एक सानो प्यारा पति र पत्नी प्रभावी छेउछाउको लागि प्रयोग। जम्पिंग अण्डामा कम्पन समारोह हुन्छ, ताकि महिला ओर्गास्ममा जारी राख्नुहोस्। यसले महिला यौन उदासीनता, orgasm को अभाव र अन्य रोगहरूको उपचारमा राम्रो प्रभाव पार्छ।
किन यसलाई जम्पिंग अन्डा भनिन्छ? हुनसक्छ यो अण्डा जस्ता आकारको छ। जम्पिंग अण्डा निम्नमा विभाजित हुन्छ: तारयुक्त जम्प अण्डा र वायरलेस जम्पिंग अण्डा। सामान्यतया जम्पिंग अण्डाले उच्च-स्तरको PVC गैर-विषाक्त पॉलिमर चिकित्सा सामग्री प्रयोग गर्दछ। प्रयोग गर्नु अघि र पछाडि तपाईंले सफा र स्वच्छतामा ध्यान दिनु पर्छ। गैर-वाटरप्रूफ जम्प अण्डाको आन्तरिक सर्किट भागले पानीलाई छुनु हुँदैन, तर अण्डा जम्पमा महिला प्रेम तरलको कुनै प्रभाव हुँदैन, यो सुरक्षित रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
जम्पिंग अण्डाहरू, जुन आघात मोटर्सले सुसज्जित छन्, अण्डको रूपमा पनि चिनिन्छ। उनीहरूको सानो आकार र बलियो उत्तेजनाका कारण, जम्पि eggs अण्डा युवा युवतीहरूमा व्यापक रूपमा लोकप्रिय भएको छ, तर एकल सेतो कलर, वृद्ध बाँकी महिलाहरू पनि। किनभने जम्पिंग अण्डा, साना पनि छ, तर शरीर र दिमागमा आनन्दको एक मजबूत भावना ल्याउन सक्छ। यो अण्डा जम्पि theको जादू हो, यसले प्रभावी ढंगले महिला शरीरको संवेदनशील क्षेत्रहरूलाई उत्प्रेरित गर्न सक्छ, विशेष गरी भगशेफ, निप्पल्स, घाँटी र फिला र अन्य संवेदनशील क्षेत्रहरूको भित्रबाट, यो उत्तेजना छिटो मस्तिष्कमा स्नायुहरू द्वारा प्रसारित हुनेछ। केन्द्र, ताकि सेक्स को उही उत्तेजना प्राप्त गर्न को लागी, ताकि शरीर र दिमाग पूर्ण रूपमा आराम। त्यसकारण, विदेशी सेक्स थेरापिस्टहरूले प्रायः जम्पि eggs अण्डा प्रयोग गर्छन् महिलालाई जाडोबाट पीडित महिलाहरूको उपचार गर्न।
अवश्य पनि, जम्पि eggs अण्डाहरू पनि पुरुषहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर पुरुषहरूको उत्तेजना र उत्साह महिलाहरूको भन्दा धेरै कम महत्त्वपूर्ण र गहन हुन्छ। एकल महिला वा महिलाहरूको लागि जो सामान्य यौन जीवन हुँदैन, अण्डा जम्प गर्नु राम्रो साथी हो। यो प्रयोग गर्न सजिलो छ, प्रभाव उत्कृष्ट छ, र महिला चाँडै orgasm मा पुग्न सक्छ। वाटरप्रूफ जम्पिंग अण्डा बाथरूम र पौंडी पोखरीमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। रिमोट कन्ट्रोल तिनीहरूको आफ्नै रिमोट कन्ट्रोल र अन्य रिमोट कन्ट्रोल हुन सक्छ। यो खेल को एक प्रकार हो, तपाईं लामो हराएको जोश अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ।
अन्डा जम्पिंग को उपयोग:
१, हस्तमैथुन गर्दा क्लीटरिस भाग हल्लाउनुहोस्, निरन्तर र उच्च-तीव्रताको उत्तेजनाले हातैले भन्दा भग्न संभोगको समय भन्दा पहिले ठूलो बनाउन सक्छ।
२, हस्तमैथुन गर्दा, जम्पि eggs अण्डा पनि G-पोइन्ट उत्तेजित गर्न घुसाउन सकिन्छ।
,, जब दम्पतीले फोरप्ले गर्छन्, पुरुष ह्यान्ड एसिडको दु: खबाट बच्न यसको प्रयोग गर्नुहोस्।
,, ताररहित जम्पि eggs अण्डा जोडीहरूमा बाहिरबाट बाहिर प्रयोग गर्न सकिन्छ।
१, जम्पि egg अण्डा प्राप्त गरेपछि, यसलाई सफा गरेर त्यसपछि प्रयोग गर्नु आवश्यक छ। न्यानो पानी संग धुने ठीक छ।
२, अण्डा र योनीको मुखमा उफ्रि गर्न मध्यम स्नेहक लागू गर्नुहोस्।
,, यदि यो ब्याट्री मोडल हो भने ब्याट्री प्रयोग गरेर यसलाई बाहिर निकाल्नुहोस्, अन्यथा ब्याट्री प्रयोग हुने छैन।
,, यदि यो चार्जि model मोडल हो भने, आधा हस्तमैथुन गर्ने प्रक्रियामा बिजुली नलगाउन प्रयोग गर्नु अघि यसलाई चार्ज गर्नुहोस्। यो धेरै दर्दनाक हो।
,, सब भन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको संग्रहमा ध्यान दिनुहोस्।
यौन खेलौनाहरूमा जम्पि eggs अण्डा पहिलो स्तर हो, यदि यौन जीवनमा उत्तेजना र रमाईलो अभाव छ भने, अण्डा जम्प गर्नु नै तपाईंको उत्तम विकल्प हुनेछ।